फुकेन अध्यादेशको ‘गाँठो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मीराको उत्कृष्ट पुनरागमन
घुँडाको शल्यक्रियापछि साहसिक दौडमा फर्केकी मीरा राईले सन् २०१७ मा दुई उपाधि जितिन् । अहिले उनी नयाँ सिजनको तयारीमा छिन् ।
पुस ८, २०७४ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — अल्ट्रा धाविका मीरा राई सन् २०१५ फेब्रुअरीमा हङकङमा भएको एसियन स्काइरनिङ च्याम्पियन भएपछि चर्चामा आएकी थिइन्। वल्र्ड सिरिजको मोन्ट ब्लान्क (फ्रान्स) मा पनि पहिलो भएपछि उनी विश्वमै चर्चित् भएकी थिइन् ।
त्यसैबेला उनले बाँया घुँडामा दुखाइ महसुस गर्न थालेकी थिइन् । तैपनि दौडिरहेकी थिइन्।
एसीएल टियर भएको रहेछ । उनले २८ जुलाई २०१६ मा इटालीस्थित भेरोना हस्पिटलमा घुँडाको शल्यक्रिया गराउनैपर्‍यो । त्यसबेला चिकित्सकले रिकोभरीका लागि ७–८ महिना लाग्ने बताएका थिए । उनी सात महिनासम्म त दौडिएनन् नै बिस्तारै अभ्यासमा भने सुरु गरेकी थिइन् । हिँड्ने र बिस्तारै दौडिने, साइक्लिङ, वाल क्लाइम्बिङ, योगाको निरन्तर अभ्यास गरिरहिन् । फिजियोथेरापी पनि निरन्तर । त्यसैले उनी २०१७ को सिजन नै दौडमा फर्किन सफल भइन् । सुरुमै सोचेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनन् तर उनी प्रयासरत रहिन् ।
अनवरत प्रयासपछि उनी २०१७ सेप्टेम्बरमा बेन नेभिस अल्ट्रा (स्कटल्यान्ड) मा पहिलो भइन्, जुन उनको पुनरागनको पहिलो उपाधि थियो । डिसेम्बरको पहिलो साता हङकङमा प्रथम हुँदै उनी फेरि एसियन स्काइरनिङ च्याम्पियन भइन् । यसले उनको पुनरागमनमा ऊर्जा थपिदियो ।
दौडनुपर्ने कुनै पनि खेलाडीलाई एसीएल टियर वास्तवमै ठूलो समस्या हुने गर्छ । यसले केही चर्चित खेलाडीको करिअर नै टुंग्याइदिएको छ । मीरालाई पनि त्यस्तो हुन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन । तर उनी मानसिक रूपमा निकै बलियो थिइन्/छिन् । आर्थिक संकटमा गुज्रिएको परिवारलाई केही गर्छु भन्ने बेला सेना समायोजनमा ‘अयोग्य लडाकु’ को ट्याग लागेकाले पनि उनलाई जस्तोसुकै तगारो पन्छाउन पनि आत्मविश्वासी बनाएको हुन सक्छ । हुन त उनले बेहोरेका दु:खकष्टको सूची बनाउने नै हो भने सफलताको चाङभन्दा बढी नै हुन आउँछ ।
दौडमा फर्कने तयारीमा रहेकै बेला उनले नेसनल जोग्राफीको एड्भेन्चर्स अफ दी इयर २०१७ को अवार्ड जितिन् । अवार्ड जितेपछि उनले गत वर्ष भनेकी थिइन्, ‘अपरेसन गरेको नौ महिना भइसक्यो । अझै सोचेजस्तो रिकोभरी भएको छैन, दौडियो भने घुँडा सुनिन्छ ।’ यसबीच घुँडा ठीक गर्नकै लागि उनी इटाली पनि पुगेकी थिइन् । गत वर्ष एसियन च्याम्पियनसिपमा जुम्लाका सुनमाया बुढा र पूर्णलक्ष्मी नेउपानेलाई लिएर हङकङ पुगेकी उनी धावकभन्दा बढी अल्ट्रा रेस अभियन्ताको रूपमा सक्रिय भइन् । उनले दौडमा फर्कनलाई हिम्मत भने हारेकी थिइनन् । कहिले स्वदेशमा त कहिले फ्रान्स–इटालीमा अभ्यास गरिरहिन् ।
‘सबभन्दा ठूलो आफ्नो स्वास्थ्य हो । पहिले घुँडा ठीक गर्छु । स्वस्थ हुन्छु । अनि दौडनेछु,’ गत वर्ष उनले भनेकी थिइन् । योजनाअनुसार रिकोभरी नभएपछि उनले २०१७ को सिजन केही रेस पनि छाड्नुपर्‍यो । उनी अहिले पनि आफ्नो घुँडा पूर्ण रूपमा ठीक नभएको बताउँछिन् । ‘लगभग ८० प्रतिशत रिकोभरी भएजस्तो लाग्छ । अलि बढी दौड्दा भने अझै दुख्न छाडेको छैन । अझै रिकोभरी हुने प्रक्रियामै छु । चाँडै ठीक हुने आशा छ,’ दोस्रोपल्ट एसियन च्याम्पियन भएपछि उनले भनिन्, ‘घुँडालाई ध्यान दिएर तनाव लिनुभन्दा छिटो रिकोभरी हुने र मानसिक रूपमा बलियो बन्ने प्रयास गरिरहेकी छु ।’
उनलाई तीन वर्षयता स्पोर्ट्स वेयर कम्पनी ‘सलोमन रनिङ’ ले प्रयोजन गरिरहेको छ । उनी पूर्ण रूपमा ठीक नहुँदै सलोमन रनिङको २०१७ को लागि तिब्बतमा भएको क्याम्पमा सहभागी भएकी थिइन् । चोटले सताएपछि उनले तीन दिनमै अभ्यास त्याग्नुपरेको थियो । त्यसैले पनि २०१७ मा उनको मुख्य योजना नै दौडमा फर्कने थियो । फर्किइन् पनि । दुई उपाधि जितिन् बेन नेभिस र एसियन च्याम्पियनसिप । यसले उनको पुरागमनलाई सानदार बनायो ।
हङकङबाट फर्केलगत्तै उनी नयाँ सिजन (२०१८) को तयारीका लागि फ्रान्स पुगिन् । फ्रान्सको आनेसीमा एक साता चलेको सलोमन क्याम्पमा विश्वका उत्कृष्ट साहसिक धावकहरू सहभागी थिए । तयहाँ उनीहरूलाई पनि प्रेरणा दिँदै आउने सिजनलाई आफैं तयारी गर्ने मीराको काम थियो । नयाँ सिजनमा के–कस्तो रणनीति बनाउने ? के–कति रेसमा दौडिने ? त्यसैको तयारीको रूपमा यस्ता क्याम्प सञ्चालन गरिन्छ ।
उनले २०१८ को सिजन लामो दूरीको अल्ट्रा दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाएकी छन् । ‘अब लामोदूरीको दौडमा केन्द्रित हुनेछु, जसमा ८० देखि १२० किमिसम्म दौडिनुपर्छ,’ क्याम्प सकेर इटाली पुगेकी उनले भनिन्, ‘आउने सिजन सात रेसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्काई रनिङ अल्ट्रा म्याराथन च्याम्पियन बन्ने प्रयास गर्नेछु । त्यसको लागि स्वदेशमै काठमाडौंका डाँडाहरूमाअभ्यास गर्नेछु ।’
प्रकाशित : पुस ८, २०७४ २०:४९